Amazon ikwughachi: Nke mbụ 13 Ihe Gbalịa - News Ọchịchị
Alexa, Amazon si virtual nnyemaaka, bụ ndị nọ n'ihe karịrị 3m US ụlọ via ahụ kwuo ihe ọkà okwu. Ugbu a ọ bụ dị na Britain - ma ihe bụ mma?
Isiokwu a na-akpọ “Amazon ikwughachi: nke mbụ 13 ihe ka na-agbalị” e dere site Darien Graham-Smith, n'ihi na The Observer on Sunday 13 November 2016 09.45 UTC
Ịmụta isi n'iwu
The nnọọ ihe mbụ ị ga-achọ ime na ọhụrụ gị na Amazon ikwughachi bụ ịmụta a ole na ole isi iwu olu. Si "Alexa: Kwụsị!"Ga-ozugbo kagbuo ọ bụla ọrụ na-aga; -eme ka music ọnụ ike ma ọ bụ were dị jụụ, ekwu "Alexa: olu elu "ma ọ bụ" Alexa: olu ala ". Ị nwere ike ima elu a kpọmkwem olu larịị site n'ikwu a ọnụ ọgụgụ dị site n'otu 10: "Alexa: olu onye "ga-eme ka audio ruo ntakwu, mgbe "Alexa: -ogbi "a ga-ebibikwa ahụ kwuo kpam kpam. Ozugbo ị wee ikowe nke a, i nwere ike amalite sorokwa ọzọ adventurous iwu, nchekwa n'ime ihe ọmụma na i nwere ike mgbe niile ịkagbu ma ọ bụ idere bụla na-achọghị ọrụ.
Agbanwe Ruth okwu
Ikekwe ị na-amasị aha Alexa - ma ọ bụ ikekwe i nwere onye òtù ezinụlọ nke na aha na-achọghị ka eme ka mgbagwoju anya. Nke ọ bụla, ị nwere ike mfe gbanwee okwu ahụ kwuo ihe na-emegharị na. Iji mee otú ahụ, emeghe Alexa ngwa gị ama ma ọ bụ mbadamba, Gaa na Ntọala, wee pịa on your ikwughachi na enweta ịgbanwe "Ruth okwu". Ị ga-ahụ na i nwere atọ nhọrọ: "Alexa", "Amazon" ma ọ bụ "ikwughachi" - n'ụzọ dị mwute, ị nwere ike ghara ịhọrọ gị aha. Ị nwekwara ike chọrọ ịbanye ụda & Ịma Ọkwa na-eme ka audio nzaghachi - a nwayọọ "boop" - mgbe ahụ kwuo ihe na-anụ Alexa aha, otú ị mara mgbe ọ na-ege ntị.
Related: goodbye nzuzo, hello Alexa: nke a bụ maka Amazon nkuzi mgbamejije, n'ụlọ robot onye na-anụ ya ihe nile
Ejikọta kalenda gị
One of ahụ kwuo ihe si ọtụtụ ihe bara uru aghụghọ bụ inwe ike ịgwa gị ihe ndị na emek i na-abịa elu. Jikọọ gị Google kalenda, nanị aga n'ime ntọala Alexa ngwa, mgbe ahụ enweta kalenda>Google kalenda>ejikọta Google kalenda akaụntụ. Na nke a emeghị eme, i nwere ike ịjụ ajụjụ ndị dị mfe dị ka: "Alexa, mgbe bụ m na-esote oge atọrọ?", ma ọ bụ "Alexa, ihe m na-arụ n'ehihie Saturday?"Ị nwere ike ịmepụta ọhụrụ ihe, oke. Dị nnọọ ike aka ná ntị na Alexa adịghị ihe ọ bụla echiche nke nzuzo: ma ọ bụrụ na i nwere ihe ọ bụla na nzuzo rendezvous kwuru ala gị Google kalenda, adịghị anya ma ọ bụrụ na ọ akwafuo na agwa ka ihe ich o ima onye òtù ezinụlọ.
Melite okporo ụzọ na egwuregwu mmelite
Ahụ kwuo ihe Mbido usoro kpaliri gị na-enye gị adreesị ụlọ, otú Alexa nwere ike ozugbo inye obodo ihu igwe na akụkọ. Ọ bụrụ na ị na-agwa ahụ kwuo ebe ị na-arụ ọrụ, ị pụkwara inwe okporo ụzọ akọ gị na-aga aga. Iji mee nke a, emeghe Alexa ngwa, Gaa na Ntọala>okporo ụzọ na mgbata ịbanye na ọrụ gị adreesị, tinyere ihe ọ bụla dị mkpa waypoints n'ụzọ ha si aga. Ị nwere ike ugbu a ịjụ "Alexa, otú ahụ bụ okporo ụzọ?"N'ihi na a ndụ update. Alexa nwekwara ike na-agụ gị n'akwụkwọ akụkọ na ndị ọzọ si nwanne anyị nwaanyị akwụkwọ, na Guardian: dị nnọọ enyere ndị "nkà" on ahụ kwuo ihe ngwa, mgbe ahụ, ọmụmaatụ, na-ekwu: "Alexa, -ajụ Guardian ka o nye m football akụkọ. "
Jikọọ smart n'ụlọ ngwaọrụ
Ahụ kwuo ihe pụrụ ịchịkwa a dịgasị iche iche nke ejikọrọ home ngwaọrụ, dị ka thermostats na smart ọkụ. Mgbe ụfọdụ, a nwere ike ịchọ ka kwadebe Alexa na a ọhụrụ "nkà": ime otú ahụ, gaa nkà>ige>smart n'ụlọ na search maka ngwaọrụ gị. Ozugbo ị na-melite, nanị ịgwa Alexa na-"achọpụta na ngwaọrụ". Ị nwere ike mgbe ahụ inye iwu dị ka "Alexa, ịtọ akwu okpomọkụ na- 20 degrees "ma ọ bụ" Alexa, dịtụrụ ime ìhè ". N'okpuru smart n'ụlọ>dị iche iche ị ga-ahụ ikike iji mepụta aha ya bụ ìgwè dị iche iche nke ngwaọrụ, otú i nwere ike - ihe atụ - atụgharị gị niile mputa ọkụ ma ọ bụ gbanyụọ na otu iwu.
Ahụ kwuo ihe na-eme ka ọ dị nnọọ mfe ịtụ ihe si Amazon. Ọ bụrụ na ị nwere Amazon Prime akaụntụ na nke ahụ melite n'ihi na otu onye-click ịtụ, ị nwere ike olu ịzụta n'ime Alexa ngwa. Ịtụ, is i "Alexa, iji Black Mirror on DVD "ma ọ bụ" Alexa, ịtụ organic quinoa ", ma na-egosi na Ịzụ mgbe Alexa agụ, sị ya azụ gị. I nwekwara ike ịgbakwunye ihe na gị nkata maka mgbe e mesịrị review. Ọ bụrụ na i nwere ụmụ na ụlọ o nwere ike ịbụ ezigbo echiche na-ahapụ a mma agbanyụrịrị, Otú ọ dị: ị nwere ike melite a anọ PIN ọnụọgụ, ma ebe ọ bụ na i nwere ikwu ya n'olu dara ụda inye ike a zuo, ikekwe ọ ga-agaghị anọ na nzuzo n'ihi na ogologo.
Ị nwere ike iji Alexa aka ịchịkwa akwu smart thermostat. Foto: Samuel Gibbs maka Observer
Jikọọ Spotify akaụntụ
Ọ bụrụ na ị na Amazon Prime so, i nwere ike ịjụ Alexa na-egwu selections si ihe karịrị 1m ewu ewu wɔfrɛ wɔn T na listi ọkpụkpọ na Prime music gụgharia ọrụ. Ahụ kwuo nwekwara ike igwu songs si gị onwe onye Amazon music Ọbá akwụkwọ - ị nwere ike bulite na- 250 tracks free. Ọ bụrụ na ị nwere a Spotify adịchaghị na akaụntụ, ahụ kwuo nwere ike strimụ site n'ebe ahụ nakwa: nanị ejikọta ya na Alexa ngwa n'okpuru mwube>music & media, mgbe ahụ N'ỤLỌ NCHE a iwu ndị dị ka "Alexa, -arụ nke bụ Air Tonight si Spotify ". Ọ bụrụ na ị na-achọghị ezipụta na isi iyi oge ọ bụla, enweta "Họrọ ndabere music ọrụ" ma họrọ Spotify si menu na-egosi.
Akụ na ọkacha mmasị gị na redio ebe
Ahụ kwuo ihe ahụ adịghị enwe onye FM erite, ma ọ integrates na TuneIn inye ohere a nnukwu iche iche nke na redio ụgbọ n'elu internet. Is i "Alexa, -egwu Radio 4 "ma ọ bụ" Alexa, -egwu zuru oke 80s "na-ege ntị. Ebe ọ bụ na TuneIn bụ a zuru ụwa ọnụ ọrụ, e nwere ihe a anya wider nso nke ndị ụgbọ okporo ígwè na ha họrọ karịa gị ga-esi na a mgbe nile erite - ọ gaghị adị WDDH na New York, ma ọ bụ ABC Adelaide? Ị ga-ahụ zuru ndepụta nke ndị ụgbọ okporo ígwè na tunein.com. Ị nwekwara ike ịrịọ ikwughachi-egwu music si a akpan akpan genre.
Alexa, -agwa m otu akụkọ
Ọ bụrụ na ị na-akwado nke okwu, na eleghị anya, wuru a n'ọbá akwụkwọ nke Audible audiobooks. Ugbu a ikwughachi nwere ike ịrụ ha gị: is i "Alexa, igwu egwu A Brief History of Time", na anya isi nke akwụkwọ ahụ gị Audible n'ọbá akwụkwọ, akụkọ ga-amalite. Dị ka na music, ị nwere ike ịgwa Alexa kwụsịtụ ma maliteghachi dị ka mkpa: "-Aga azụ" skips azụ 30 sekọnd, mgbe "ibuot oro etienede" na "aga na isi" na-arụ ọrụ dị ka ị ga-atụ anya. Ikwughachi ike adịghị anya na-agụ si Kindle akwụkwọ oke, ebe ọ bụ na mma bụ ama dị ka US ọrụ. Ya nnyefe ga-abụ dị ka eke dị ka a ọkachamara storyteller, ezie na, na-adịghị atụ anya ya ime na olu.
Bulie a Pizza site na Dị nnọọ Rie ngwa, nke nwere ike jikọrọ Alexa. Foto: dị nnọọ Rie
Ịtụ a takeaway
Nkà ekwe ka ahụ kwuo ihe na-interface na real-ụwa ọrụ, na ọ dịghị nweta ọtụtụ karịa n'ezie karịa JustEat. Ozugbo ị wụnye na nkà (na-jikọrọ ya na gị na Dị nnọọ Rie akaụntụ), i nwere ike ịtụ nri abalị enweghị na-ebuli a mkpịsị aka. N'ezie, ọ dịghị onye chọrọ ige ntị Alexa gụpụta ihe dum menu, otú maka now ọrụ na-ejedebeghị na-ekwughachi iwu gị akụkọ ihe mere eme: you might say “Alexa, ask Just Eat to reorder pizza” or “Alexa, ask Just Eat to reorder ramen”. As with Amazon voice purchasing, there’s nothing to prevent the service from being abused by inquisitive children, but perhaps that won’t be a big problem for the single men it’s evidently aimed at.
In the skills library, under games, trivia & accessories, you’ll find dozens of games you can play with Alexa, including interactive quizzes, bingo, and even blackjack. Alexa can roll virtual dice for you too – with any number of sides – and she plays a mean game of rock, akwụkwọ, scissors. If that’s too simple for you, she can also play the more sophisticated “rock, akwụkwọ, scissors, lizard, Spock” variant. If you’re looking for more cerebral stimulation, try asking some philosophical questions, such as whether Santa Claus exists or who let the dogs out. Alexa has a lot of smart responses, and she’s well versed in films, books and TV shows.
58576	10 Amazon.com, Nkeji edemede, Darien Graham-Smith, Discover, E-Commerce, Atụmatụ, Internet, Internet ihe, Observer New Review, Technology, The New Review, The Na, Voice ude
← Huawei Ma Ọ Bụ Nwunye 9: Ị chọrọ n'ezie ka a 5.9in Phablet? Nke Windows laptọọpụ nwere ike Dochie a MacBook Pro? →